Cinema HD V2 Uhlelo lokusebenza - Buka amamuvi, uchungechunge nemibukiso ye-TV Mahhala
Cinema HD OkweFireStick
Cinema HD Okwe-Android TV Box
Cinema HD Okwe-Google TV 4k
Cinema HD Okwe-Smart TV
Cinema HD Okwe-Roku
Cinema HD I-Windows
Cinema HD I-Mac
Cinema HD Okwe-Linux
Lungisa Cinema HD Amaphutha
Cinema HD - Imfucumfucu Yangempela Ayisebenzi [Ilungisiwe]
The Cinema HD I-APK ayinayo idatha etholakalayo, azikho izixhumanisi, azikho uxhumano, noma iphutha leseva (FIX)
Imibhalo engezansi Iyaphahlazeka, Ukubhafa/Ukungafaki, kanye Nokuphahlazeka kwe-APK ye-Cinema konke kuxazululiwe.
Cinema HD I-APK Ayikho Idatha, Ayikho Enikeziwe, Akukho Ukuxhumana noma Iphutha Leseva (FIX)
Ibuyekeza iMovie ivuliwe Cinema HD
Namuhla, abantu bavame ukubukela izinhlelo ezisakazwayo kumabonakude noma basebenzise i-inthanethi ukuze babuke amamuvi abawathandayo nemibukiso ku-inthanethi ezinhlelweni ezikhokhelwayo. Ungathola izinhlelo zokusebenza eziningi ezihlinzeka ngezinhlelo zakho eziyintandokazi namamuvi afana Netflix, Hulu, HBO, ezinye izinhlelo zokusebenza zokusakaza-bukhoma, futhi zonke izinhlelo zokusebenza ezikhokhelwayo.
Uma ufuna ukuzwa uhlelo lokusebenza lokusakaza mahhala olunokuqukethwe kwekhwalithi ephezulu nomtapo wolwazi omkhulu wamamuvi nezinhlelo ze-tv, landa Cinema HD APK kusuka kuwebhusayithi yethu CinemaHDv2.Net ukujabulela njengamanje.
Uzothola ngokushesha okuqukethwe okuthandayo futhi ujabulele kudivayisi yakho ye-Android ngenxa yezici ezikhangayo ezihlinzekwa yilolu hlelo lokusebenza. Qhubeka ufunda indatshana ukuze uhlole lezi zici.
Sethula ku Cinema HD I-AP
Izici ezivelele ze- Cinema HD
Amathani amamuvi nezinhlelo ze-TV
Isipiliyoni sesinema encane
Jabulela okuqukethwe okunemibhalo engezansi
Engeza izinhlelo zakho ozithandayo ohlwini lwakho
Isici sohlu oluphakanyisiwe
Hight quaility revolution kanye nomsindo
Jabulela amamuvi nezinhlelo ze-tv ungaxhunyiwe ku-inthanethi
Londoloza futhi Ubuyisele
Yini ekhethekile ku Cinema HD Ifayela le-apk
Inombolo engenamkhawulo yamamuvi nemibukiso mahhala
Ungalanda kanjani Cinema HD I-apk ku-Android?
Izinyathelo ezijwayelekile zokulanda i Cinema HD App
Imiyalelo enemininingwane okufanele uyifake Cinema HD I-AP
Ungalanda kanjani Cinema HD Uhlelo lokusebenza ku-FireStick 4K, i-Fire TV?
Izinyathelo zokufaka Cinema HD I-apk ye-PC?
Landa futhi ufake Cinema HD I-APK ku-Windows 11/10/8.1/7 PC noma ikhompyutha ye-MAC [TUTORIAL]
Ku-Linux Mint, Ubuntu, kanye ne-Fedora, faka ifayela le- Cinema HD I-MOD APK.
Izinyathelo zokufaka i-Slashlik Android Emulator ku-Linux
Ungayithola Kanjani I-GenyMotion Android Emulator ku-Linux
Faka Cinema HD uhlelo lokusebenza kukhompuyutha ye-Linux kusetshenziswa i-Shashlik/GenyMotion Android Emulator
Ukusebenzisa i-Genymotion Android Emulator
Ungayithola kanjani Cinema HD ukuze usebenze ku-Android TV Box naku-Smart Tv?
Izici Cinema HD ku-Smart TV
ukufaka Cinema HD V2 ku-Smart TV [LG, VU, OnePlus, Samsung, MI, Phillips]
Isetshenziswa kanjani iTrakt TV ku Cinema HD v2 ku-Smart TV
Thwebula Cinema HD V2 I-APK ye-Android TV Box
ukufaka Cinema HD V2 I-APK ku-Roku Stick
Isinyathelo 1: Kudivayisi yakho ye-Android, landa futhi ufake uhlelo lokusebenza le-Local Cast.
Isinyathelo sesi-2: Landa futhi ufake uhlelo lokusebenza lwe-Local Cast Receiver kudivayisi yakho ye-Roku.
Isinyathelo sesi-3: Xhuma Idivayisi Yakho ye-Android noma ye-Apple ne-Roku Stick
ukufaka Cinema HD v2 ye-Google TV 4K ku-Chromecast
Ungabuyekeza kanjani Cinema HD I-Apk enenguqulo yakamuva?
Isetshenziswa kanjani Cinema HD I-apk?
Cinema HD iwuhlelo lokusebenza oluhle kakhulu lwamadivayisi akho e-Android olukunikeza uhlu lwamamuvi adumile, nemidlalo ye-TV yekhwalithi ephezulu. Lolu hlelo lokusebenza lukunikeza injini yokusesha ukuze uthole ngokushesha amamuvi nemidlalo ye-tv oyithandayo futhi okhetha ukuyijabulela.
Cinema HD Inguqulo ye-Beta
Lolu hlelo lokusebenza luzobonisa izixhumanisi ezitholakala mahhala kuwebhusayithi, futhi zizovela kudivayisi yakho. Ngezici eziphoqelelayo zalolu hlelo lokusebenza, awusoze waphelelwa izinketho zokusakaza-bukhoma zezinhlelo zakho ozithandayo namamuvi. Kwenzani Cinema HD I-AP unayo?
Ibhokisi le-Android TV
I-Google TV 4K
Lokhu Cinema HD uhlelo lokusebenza lunokuxhumana okulula okukusiza ukuthi uqonde ngokushesha ukuthi usetshenziswa kanjani kanye nezinkinobho zokusebenza esikrinini sohlelo lokusebenza. Ungakwazi upheqa kalula ngezihloko ukuthi Cinema HD uhlela kulolu hlelo lokusebenza.
Iphinde ikuvumela ukuthi ubheke ama-trailer amamuvi nemibukiso ngaphambi kokuthi unqume ukuthi ukhethe ukuthi yikuphi okuqukethwe ongakuthokozela noma cha. I-interface enhle futhi elula yalolu hlelo lokusebenza lwe-Cinema izokusiza ukuthi ube nesipiliyoni esihle sokubuka i-movie.
Lolu hlelo lokusebenza lwe-Cinema lukunikeza ingcebo yamamuvi nemibukiso emikhakheni engama-60. Ungathola kalula izinhlobonhlobo zamamuvi asuka ethusayo, ezothando, e-anime, nokuningi esigabeni salolu hlelo lokusebenza. Ngaphandle komtapo wolwazi omkhulu wamamuvi, uzothola kalula izinhlelo ze-TV futhi uzijabulele mahhala ngazo Cinema HD.
Cinema HD ikunikeza umuzwa omuhle wokubuka imuvi njengokubuka esinema encane. Uma wesaba ukuya e-cinema ukuze ubuke amafilimu, lolu hlelo lokusebenza luzoba yisinqumo esifanelekile kuwe.
Cinema HD v2 - Isipiliyoni sesinema encane
Udinga nje ukuvula ifoni yakho ye-Android futhi ufinyelele le-apk ye-Cinema ukuze ujabulele okuqukethwe kwakho okuyintandokazi khona kanye ekhaya lakho noma kuphi lapho ufuna. Lolu hlelo lokusebenza luzosiza abathanda i-movie nezokuzijabulisa njengawe ukuthi bonge isikhathi esiningi futhi bajabulele okuqukethwe okuthandayo kalula.
Lokhu Cinema HD uhlelo lokusebenza izokunikeza isici esiwusizo ongadlala amavidiyo anemibhalo engezansi ngokuzenzakalelayo. Uma ungakhethi imibhalo engezansi, kuzodingeka ukhethe ifayela mathupha ukuze ujabulele okuqukethwe. Uhlelo lokusebenza luzohlinzeka ngemibhalo engezansi ngendlela efanele ukuze ikunikeze umuzwa ophelele wokubuka imuvi.
Jabulela okuqukethwe ngemibhalo engezansi - Cinema HD v2
In Cinema HD, uzoba nokukhetha okuhle nge I-Trek TV ukuhlanganiswa okukusiza ukuthi udale izinhla zokudlalayo ukuze udlale ngokushesha izinhlelo zakho eziyintandokazi. Lesi sici sizodala uhlu lwemidlalo oyibukile kamuva nje futhi sizokwazisa njalo uma kunesiqephu esisha sohlelo noma imuvi oyibukile.
Ngenxa yalokho, ungakwazi ukubuyekeza ngokushesha futhi kalula okuqukethwe okusha futhi ujabulele izici eziningi ezikhangayo uhlelo lokusebenza olungazinikeza.
With Cinema HD, uzoba nenketho yokuvula ukuzidlalela ukuze ujabulele ngokushesha amamuvi nemibukiso oyikhethayo. Uma ukhetha okuthile, izoveza ezinye izixhumanisi, futhi uzodinga ukukhetha eyodwa yalezo zixhumanisi bese ukhetha inketho ethi "Dlala" ukuze uqale ukuyibuka. Kodwa ngokudlala ngokuzenzakalela, ngeke kudingeke ukuthi ukhethe izixhumanisi, kanye ne Cinema HD uhlelo lokusebenza izoqala ukudlalela ividiyo.
Cinema HD inesinye isici esiwusizo Uhlu Oluphakanyisiwe, iphuzu eliqinile lalolu hlelo lokusebenza lwe-movie oluthandwa abasebenzisi abaningi. Imibukiso eminingi emisha namamuvi ayaseshwa futhi avuselelwe kumenyu enkulu yohlelo lokusebenza nsuku zonke.
Cinema HD V2 – Isici sohlu oluphakanyisiwe
Ngaphezu kwalokho, uhlelo lokusebenza futhi likuhlinzeka ngolunye uhlu oluncike kuphela ethuluzini lokuhlunga le-AI lohlelo lokusebenza ukuze luhlunge futhi luncome amamuvi nemibukiso yohlobo olufanayo nalokhu okubukayo noma okufunayo.
Amamuvi nemibukiso yalokho Cinema HD okuncomayo kuwe konke kuzoza nolwazi olunemininingwane njengegama, isilinganiso, imvelaphi, idethi yokukhishwa, i-trailer, nabalingisi abakhulu. Kusukela emininingwaneni enemininingwane ekusiza ukuthi uqonde ulwazi mayelana namamuvi, uhlelo lukwenza kube lula kuwe ukuthi ukukhethele okuqukethwe okulungile futhi ukujabulele.
Ukukunikeza umuzwa ongcono kakhulu, ngaphandle kokukunikeza ngenani elikhulu lezinhlelo nama-movie asakazwayo, Cinema HD futhi ikusiza ukuthi ujabulele okuqukethwe kwekhwalithi ephezulu ngaphandle kokungena kumfucumfucu wangempela.
Uzoba nesikhathi esihle sokuphumula ngezinhlelo zakho eziyintandokazi namamuvi izinga eliphezulu eligcwele isixazululo nalolu hlelo lokusebenza. Ngaphezu kwalokho, ungasebenzisa isici sokudlala ngokuzenzakalela ukuze usibuke HD or i-HD ephezulu amamuvi ku Cinema HD.
Uzoba nomuzwa ojabulisa kakhulu wokubuka imuvi ngesici sokulanda ungaxhunyiwe ku-inthanethi leso Cinema HD ikunikeza. Ngalesi sici esiwusizo, ungalanda kalula amamuvi, izinhlelo ze-TV futhi ujabulele noma yikuphi okuqukethwe kwakho okuyintandokazi kalula.
amamuvi nezinhlelo ze-tv - Cinema HD v2
Ungajabulela amamuvi, nemibukiso kuselula yakho ye-Android noma nini nanoma yikuphi lapho ufuna khona ngalokhu Cinema HD I-AP uhlelo lokusebenza. Dawuniloda amamuvi, izinhlelo ze-TV futhi uzicwilise eziqeshini ze-TV, ifilimu ngaphandle koxhumano lwe-inthanethi noma izindleko zedatha yeselula kudivayisi yakho.
Cinema HD izokongela isikhathi esiningi uma usebenzisa uhlelo lokusebenza ngokwenza ikhophi yasenqolobaneni konke okuthandayo, umlando, izilungiselelo, nokuncamelayo kufayela elihlukile elenzelwe wena nje. Ukuze uthole indawo yaleli fayela, uzoya ku- Landa/cinema HD/isipele.
Ungakwazi futhi ukuthekelisa ifayela futhi ulilayishe kunoma imaphi amadivayisi akho amasha. Ngaphezu kwalokho, lolu hlelo lokusebenza lukunikeza isici sokwenza isipele ngokuzenzakalela, ukuze ukwazi ukusinika amandla ngemva kokuphuma kuhlelo lokusebenza ekwenzeni isipele nokubuyisela izilungiselelo. Ukusuka lapho, ukwenza ikhophi yasenqolobaneni kuzophathwa ngemva kokuvala uhlelo lokusebenza, futhi ungakwazi ukuqhubeka kalula nokujabulela okuqukethwe kwakho okuyintandokazi ngokuzayo.
Thwebula Cinema Hd v2 apk
The Cinema HD uhlelo lokusebenza izophinde ikunikeze nezinye izici eziningi eziyisisekelo njengezihlungi, isidlali sevidiyo esizenzakalelayo, kanye nekhono lokuhlunga okuqukethwe kwekhwalithi ephansi. Uzothola lezi zici ezihlukahlukene, eziwusizo zokukunikeza umuzwa omuhle wokubuka wamamuvi nezinhlelo zakho ozithandayo.
Uma ufuna ukuzwa inguqulo ethuthukisiwe enezici eziningi ezithuthukile zamahhala ukuze uthole ulwazi oluhle nakakhulu, landa Cinema HD I-AP kuwebhusayithi yethu CinemaHDv2.Net. Ngeyethu Cinema HD UMod Apk, uzothola izici eziningi ezithuthukile, ezihlanganisa: Konke okuqukethwe kumahhala futhi akunamkhawulo.
Cinema HD I-AP inguqulo eguquliwe ye Cinema HD Izinhlelo ze-TV ezitholakala mahhala kuwebhusayithi yethu CinemaHDv2.Net. Ngaleli fayela le-apk, ungafinyelela ngokukhululekile konke okuqukethwe i Cinema HD uhlelo lokusebenza luhlinzeka mahhala.
Cinema hd - Buka amafilimu e-HD Mahhala
Ngaphezu kwalokho, lo Cinema HD I-AP izophinde ikunikeze ngenani elingenamkhawulo lokuqukethwe, ukuze ujabulele amamuvi akho owathandayo nemibukiso ngaphandle kokukhathazeka ngokuphelelwa okuqukethwe.
Ngenxa yalezi zici ezithuthukisiwe zalolu hlelo lokusebenza lwe-movie, uzokonga imali eningi futhi awudingi ukukhokha izindleko zokubhalisa zanyanga zonke, vele ukhethe okuqukethwe kwakho okuthandayo futhi ujabulele.
Uma uke wabhekana nezinkundla zokubuka ama-movie njenge Netflix, HBO, noma ezinye izinhlelo zokusebenza zokusakaza bukhoma, cishe uzokhathala ukubhalisela i-akhawunti futhi ukhokhe izinkokhelo ukuze ufinyelele amamuvi akho owathandayo, imibukiso, nemiklomelo. bavuse.
Manje, ngeke usakhathazeka ngalokhu, Cinema HD uhlelo lokusebenza luzohlinzeka ngethuluzi lokukhetha ngokukhululekile nokusakaza amamuvi, nezinhlelo ze-TV ngaphandle kokubhalisela i-akhawunti futhi mahhala ngokuphelele.
Awudingi ukukhathazeka ngokudalula imininingwane yakho yomuntu siqu ukuze ubhalise i-akhawunti njengegama lakho, ikheli, ne-imeyili. Ngalesi sici, ungakwazi ukufinyelela ngokukhululekile futhi ujabulele ngokuqukethwe kwakho okuthandayo okunikezwa yi-Cinema ngaphandle kokuthi ungene ku-akhawunti yakho.
In Cinema HD I-AP, ngeke kudingeke ukhathazeke mayelana nezikhangiso ezibonakala ziphazamisa ukuzizwisa kwakho. Le nguqulo ye-mod ye Cinema HD izosusa zonke izikhangiso ukuze usakaze amamuvi, nezinhlelo ze-TV kalula nangaphandle kokuphazamiseka.
Cinema hd v2 ukulanda apk
Ukulanda Cinema HD I-AP isicelo sokujabulela amamuvi wamahhala, izinhlelo ze-TV, ungalandela izinyathelo ezilula ezingezansi:
Isinyathelo 1: Ku faka i-Cinema Apk, uzodinga ukuvumela idivayisi yakho ye-Android ukuthi ifake lolu hlelo lokusebenza emithonjeni yangaphandle. Ukuze unike amandla lesi silungiselelo, uzodinga ukuya kokuthi Izilungiselelo ku-Android yakho, bese ukhetha Ukuvikeleka, bese unika amandla imithombo engaziwa.
Isinyathelo 2: Esikrinini sakho sedivayisi ye-Android, uzoya ku CinemaHDv2.Net bese usesha Cinema HD I-AP kubha yokusesha.
Isinyathelo 3: Uchofoza "Thwebula Cinema HD v2 APK” inkinobho engxenyeni engezansi ye-athikili
Isinyathelo 4: Lindani Cinema HD I-AP inqubo yokulanda uhlelo lokusebenza imizuzwana embalwa, bese ungakwazi ukuvula le apk cinema ukuze ujabulele.
⬇︎ Landa Cinema HD V2 APK
Okokuqala, uzoya kuzilungiselelo kudivayisi yakho ye-Android, bese ukhetha "Izinhlelo zokusebenza nezaziso":
Okulandelayo, khetha “Izimvume zohlelo lokusebenza"
Ngemuva kwalokho, uzoya ku-"Faka izinhlelo zokusebenza ezingaziwa"
Khetha Isiphequluli se-Chrome ngezinketho:
Vula: "Vumela kusuka kulo mthombo"
Esikrinini sasekhaya, uzoya kusiphequluli se-chrome bese ukhetha okulandwayo
Yenza inqubo ye Faka i-Cinema Apk Ifayela
ukufaka Cinema HD v2
Lindela ukufakwa ukuqedela
Ngemva kokuqeda inqubo yokufaka Cinema HD V2, manje usungakwazi ukuvula ngokushesha ifayela le-apk futhi ujabulele amamuvi amaningi nezinhlelo ze-TV ezinikezwa i-Cinema Apk kuma-smartphone akho e-Android, ngaphandle kwesilingisi se-Android.
Ukulanda lokhu Cinema HD I-AP on I-FireStick 4K, I-TV ye-Fire Stick 4K, uma ufake noma yiliphi ifayela le-Apk kweyakho Isitika Somlilo, kuzoba lula ukufaka uhlelo lokusebenza. Uma kungenjalo, uzodinga ukulandela izinyathelo ezingezansi ukuze ufake I-Cinema Apk ku-Firestick:
Isinyathelo 1: Okokuqala, uzoqala idivayisi yakho bese ulinda isikrini sasekhaya sedivayisi ukuthi sivele. Esikrinini sakho sohlelo lokulawula, uzodinga ukunika amandla “Imithombo engaziwa"(Faka izinhlelo zokusebenza ezingaziwa) ukushintsha.
Isinyathelo 2: Okulandelayo, khetha: “I-Fire TV yami"Noma"amathuluzi ami"
Isinyathelo 3: Ngemva kwalokho, uzochofoza ku-: “Izinketho zonjiniyela"
Isinyathelo 4: Isikrini sizobonisa inketho "Izinsiza ezingaziwa” ongakwazi ukukunika amandla noma ukucisha.
Isinyathelo 5: Okulandelayo, uzocinga inketho "thwebula” Esikrinini Sasekhaya bese uchofoza ku- “Vumela” ukusebenzisa lolu hlelo lokusebenza ukuvula uhlelo lokusebenza lokulanda.
Isinyathelo 6:Ku "Uhlelo lokusebenza lokulanda” kwesikrini sakho I-TV TV Stick, uzokwenza esigabeni sayo sesiphequluli bese ufaka isixhumanisi: https://cinemahdv2.net/download/ ukuvula le Uhlelo lokusebenza lwe-Cinema Apk futhi ulande lolu hlelo lokusebenza lwamahhala lwefayela lesikhala ukuze ujabulele amamuvi nohlelo. Noma landa ifayela le-Apk lapha:
⬇︎ Landa Cinema HD V2.4.0 APK
Isinyathelo 7: Ngemva kokuqeda ukulanda ifayela le I-Cinema Apk ku-Firestick, I-TV yomlilo, izobese isetha ukufakwa ngokuzenzakalelayo futhi ngokushesha. Akufanele: ungaphumi esikrinini esikhulu ukuze inqubo yokufaka yenzeke ngempumelelo.
Isinyathelo 8: Ngemva kokuqeda ukufaka I-Cinema Apk ku-Firestick, ungavula i Cinema HD Ifayela le-apk futhi ujabulele izinhlelo zakho ozithandayo namamuvi noma nini, noma kuphi lapho ufuna.
Ungakwazi ngokushesha Faka Cinema HD apk on I-FireStick 4K, I-TV TV Stick, I-Cube ye-Fire Fire ngezinyathelo eziphephile nezisebenzayo zemidiya yakho efinyelelwe. Ungajabulela ukusakaza-bukhoma okuqukethwe uma usebenzisa Cinema HD apk ngaphandle kokuya kumasayithi okusakaza-bukhoma noma kufanele ufake izinhlelo zokusebenza.
Uzodinga i I-Android Emulator kwalokhu. Isidlali sohlelo lokusebenza lwe-Nox iyisimulator entsha ye-Android enezici eziningi eziwusizo. Ungase uthole i Isidlali sohlelo lokusebenza lwe-Nox ukusetha okungaxhunyiwe ku-inthanethi kusuka ngezansi.
⬇︎ Landa i-NoxApp Player ye-Windows
⬇︎ Landa i-NoxApp Player Ye-Mac
Linda ukuze ukufakwa kuqedwe. Uma ukusetha okungaxhunyiwe ku-inthanethi sekuqedile ukulanda, chofoza kabili ifayela elisebenzisekayo ukuze uqale inqubo yokufaka Isidlali sohlelo lokusebenza lwe-Nox.
Lapho uyokwenza qala i-Nox App Player, iwizadi yokufaka ivela esikrinini enamabhathini ambalwa. Ewindini lokugcina, i-'ukufaka' inkinobho izobonakala. Sicela uthephe okuthi 'ukufaka' inkinobho ukuvumela ukusetha faka i-Nox App Player ku-Windows PC/MAC Computer yakho.
Ngemuva kokwethula i-emulator, khumbula ukuthi kungathatha isikhathi ukuthi isifake. I-Nox App Player izosetha ngokushesha ku-PC yakho.
Khona-ke, uma ungakakwenzi, landa i-Cinema APK kusukela kusixhumanisi esingezansi.
⬇︎ Landa Cinema HD APK
Uma amafayela e-APK eseqedile ukulanda, chofoza kabili kuwo ukuze uqalise i-Nox App Player. Khetha Vula Nge kwimenyu ephumayo evelayo.
I-emulator izodawuniloda ngokuzenzakalelayo futhi ifake ifayela le-APK kweyakho Ikhompyutha ye-Windows PC/MAC.
Inqubo izothatha amaminithi ambalwa nje ukuqeda. Ngemva kwalokho, the I-Cinema APK icon ingatholakala ku- Isidlali sohlelo lokusebenza lwe-Nox isikrini sasekhaya.
Ukuze uqalise uhlelo, mane uthephe isithonjana salo.
Ungafaka i-Android APPS ivuliwe I-Linux kanye nokuphuma kwayo, okuhlanganisa i-Mint, Ubuntu, ne-Fedora, usebenzisa i I-Shashlik Android Emulator or I-GenyMotion Android Emulator.
Ungabuka imiyalelo kanjiniyela ye-Shashlik Android Emulator kusuka lapha. Sifake nekhophi ngezansi ukuze kube lula kuwe.
Usebenzisa umyalo olandelayo kumyalo womyalo, landa Ithuluzi Le-Repo:
Okulandelayo, thayipha umyalo olandelayo efasiteleni lomyalo esikrinini esilandelayo esivelayo:
Manje, sicela udale uhla lwemibhalo olusha bese uqala ukuvumelanisa indawo yokugcina. Ukuze kube lula kuwe, le miyalelo elandelayo inikeziwe.
Ekugcineni, thayipha umyalo olandelayo ukuze uqedele ukufaka.
umthombo ukwakha / envsetup.sh
Ungasebenzisa isixhumanisi esisohlwini olungenhla ukuze landa i-GenyMotion Android Emulator emshinini wakho we-Linux.
Ekugcineni, landa futhi ufake i-GenyMotion ku-Linux PC yakho. Ungathola ulwazi olwengeziwe ngale nqubo isixhumanisi ngenhla.
Landa futhi ufake i-emulator ye-Android kusuka http://www.shashlik.com/ -> Ngezakho I-Linux PC, landa futhi uqalise i-Shash.
Download Cinema HD I-APK yakamuva ifayela kudivayisi yakho. Sinikeze isixhumanisi sakho ngezansi, njengokukusiza kwakho.
Hudula bese uphonsa ifayela le- Cinema HD MOD APK ifayela kusixhumi esibonakalayo se-Shashlik Emulator.
Isinyathelo esilandelayo kuzoba ukuqalisa isifaki.
Ngemva kokufaka, ungaqala ukusebenzisa Cinema HD ohlelweni lwakho lwe-Linux.
Sicela uvule i I-GenyMotion Android Emulator.
Hudula bese uphonsa ifayela le- Cinema HD I-APK ye-MOD engenazikhangiso ifayela olidawunilode kusuka ekhasini eledlule kulo kusixhumi esibonakalayo se-GenyMotion.
Ukufakwa manje kuzoqala.
Ngemva kokufaka kuqediwe, ungasebenzisa Cinema HD APK ukusakaza amamuvi akho ayintandokazi nezinhlelo ze-TV mahhala.
Manje usungabuka amafilimu akho ayintandokazi nochungechunge kudivayisi yakho ye-Android. Nge-Cinema APK, ungase ujabulele wonke amamuvi akho owathandayo, izinhlelo ze-TV, nochungechunge mahhala. Manje ungase uzitike ngokubuka ngendlela ofuna ngayo ngenxa yale software emangalisayo, eza namakhono amahle kakhulu futhi imahhala ngokuphelele.
Cinema HD APK inenani elikhulu lamashaneli e-TV ongakunikeza ngencazelo ephezulu, futhi ngenxa yokuthi lolu hlelo lokusebenza luyamangalisa kangangokuthi kungenzeka lugcine uxhumekile kudivayisi yakho ye-Android isikhathi sonke.
Noma uhlelo lokusebenza lungakatholakali ku-Google Play, lungase lufakwe kudivayisi yakho kusetshenziswa izinsiza zezinkampani zangaphandle. Uhlelo lokusebenza lumahhala ngokuphelele futhi luqukethe izinto eziningi ongazijabulela.
Uhlelo lokusebenza luhlanganisa izici nezici ezimbalwa ezivelele, ezinye zazo ezilandelayo.
Azikho izindleko ezifihliwe ezihlobene nale sevisi.
Izinga eliphezulu lokuqukethwe lohlelo lokusebenza liyanezela ekuthandeni kwalo.
Uhlelo luphephe kakhulu futhi luthembekile.
Inokubukeka okuhle okwenza ibonakale ikhanga kakhulu.
Kukhona ingcebo yeziteshi ze-TV nezinye izinto ezifinyelelekayo, okuyinto enhle kakhulu.
Indlela 1: Ukusebenzisa Indlela Yedrayivu Yepeni
1; Ungasebenzisa lolu hlelo lokusebenza kukhompyutha yakho smart TV, njenge Samsung Smart TV, I-LG Smart TV, Sony, Nabanye.
2; Okokuqala nokubalulekile, vula imenyu yezilungiselelo ze-Smart TV yakho.
3; Setha okuthi Vumela kusuka Imithombo engaziwa Kuya ku-On.
4; Thola “I-ES File Explorer"Ku Isitolo Play futhi uyilande kudivayisi yakho.
5; Vula uhlelo lokusebenza bese ucindezela Yengeza.
6; Ngemuva kwalokho, chofoza kabili ifayela bese ulifaka kudivayisi yakho ye-Android ngokuchofoza ku ibhukumaka. -> Chofoza amabhukumaka ukuze ufinyelele futhi Faka a Uhlelo lokusebenza lwe-Cinema APK kusukela https://cinemahdv2.net/.
7; Ungafaka uhlelo kumafayela alandiwe bese uqala ukulisebenzisa.
Indlela 2: Ukusebenzisa i-Puffin Browser
Ungakwazi faka Cinema HD APK ifayela kweyakho smart TV usebenzisa Puffin Isiphequluli. Isiphequluli se-puffin isiphequluli esisha esisetshenziswa kakhulukazi kuma-Smart TV ukulanda izinhlelo zokusebenza. Ake ngikubonise indlela yokukhipha nokufaka Cinema HD I-APK enesiphequluli se-puffin.
Vula i-Smart TV's Isitolo Play futhi faka Isiphequluli se-Puffin.
Ku-Smart TV yakho, vula i Isitolo Play bese ufaka Puffin Isiphequluli.
Vula the Isiphequluli sewebhu sePuffin on wakho smart TV (idinga uxhumano lwe-inthanethi).
Download Cinema HD APK kusuka kusixhumanisi esingezansi usebenzisa i- Isiphequluli se-Puffin. Ifayela le-APK lizolondolozwa kufolda yakho Yokulanda ngemva kokulanda.
Thepha ifayela le-APK uma usulilande kukhompuyutha yakho. Bese, iya kufolda yokulanda bese uchofoza kabili ifayela le-APK. I Imithombo Engaziwa inketho izocushwa.
Uma ufuna Faka ifayela le-APK ku-smart TV yakho, kufanele uqale uvule Imithombo Engaziwa inketho.
Ngemva kokunika amandla i- Imithombo Engaziwa inketho, sebenzisa inkinobho yesilawuli kude ethi Faka ukuze uvule ifayela le-APK elilandiwe.
The Cinema HD APK izofakwa kweyakho smart TV ngemva kokuchofoza inkinobho yokufaka ekwazisweni.
The Cinema HD uhlelo lokusebenza isifakiwe manje; ungafinyelela kuyo ngokuya kokuthi Izinhlelo zokusebenza kweyakho smart TV.
Ngaphambi kokulanda nokufaka ifayela le- Cinema HD APK, qiniseka ukuthi i-smart TV yakho inesikhala esanele.
I-Trakt TV isengezo se-TV esihlakaniphile esirekhoda wonke umlando wakho wokubuka. Isengezo se-Trakt TV sizolandela yonke into oyibuka ku-smart TV yakho. Ungabheka emuva ezinhlelweni zangaphambilini ozibone ku-smart TV yakho. Nazi izinqubo zokufaka isengezo se-Trakt TV ku- Cinema HD uhlelo lokusebenza.
Ngemva kokufaka i- Cinema HD uhlelo lokusebenza, iya kufayela le- inketho yemenyu Bese ukhetha Amasethingi.
Thepha Ama-Akhawunti inketho ku Amasethingi imenyu.
Kumenyu yama-akhawunti, khetha Ngena ngemvume ku-Trakt TV njengendlela yesithathu. Faka isengezo ngokukhetha inketho.
Manje uzodinga ukufaka eyakho I-Trakt TV imininingwane ebhokisini lokungena. Ezinkambini zegama lomsebenzisi nephasiwedi, bhala igama lakho lomsebenzisi nephasiwedi. Bese ucindezela u-“Ngena ngemvume"Inkinobho.
Isengezo se-Trakt manje sikuvumela ukuthi ulandelele zonke iziqephu zokubuka.
Landela izinqubo ezifanayo njengangaphambili, kodwa kulokhu hamba uye kwakho Ibhokisi le-Android TVizilungiselelo zokuphepha futhi uvule Imithombo Engaziwa.
Ngemva kwalokho, ungasebenzisa isixhumanisi esinikeziwe ukuze uthole ifayela le-APK yohlelo lokusebenza.
Linda kuze kuqedwe ukulanda bese uvule ifayela.
Bheka uhlelo lokusebenza ku-Android TV Box yakho ngemva kokuqeda ukulifaka.
Manje usungaqalisa futhi usebenzise uhlelo olusuka kulesi sikrini.
Ngaphambi kokuthi uqale ukufakwa, qiniseka ukuthi i-smartphone yakho ye-Android kanye ngonyaka idivayisi ixhunywe kunethiwekhi efanayo ye-WiFi. Awudingi ukuqeda ifoni yakho ye-Android ngalokhu.
Ungalanda I-Cinema APK Faka ifayela ku-smartphone yakho ye-Android kusuka lapha.
Download CINEMA HD v2 I-APK kusukela kusixhumanisi esingezansi:
Ukuqala, kufanele ulande futhi ufake uhlelo lwezinkampani zangaphandle olwaziwa ngokuthi 'Abalingisi Bendawo' ukusuka Isitolo se-Google Play.
Vula the Uhlelo lokusebenza le-Local Cast. Isikrini esikhulu sohlelo lokusebenza sizoba nesithonjana sokusakaza esiphuzi. Khetha eyodwa ngokuthepha kuyo, futhi uzoyiswa kuhlu lwamadivayisi angasakazwa.
Kuzoba khona ukukhetha ukushintsha iskeni esisebenzayo. Sebenzisa le ndlela ukunika amandla i-'Izinketho Zokuthola' ku-Roku.
Ukuze uqale, xhuma i- I-Roku Stick ku-Smart TV yakho futhi uqinisekise ukuthi unoxhumano lwe-inthanethi oluzinzile ekhaya lakho.
Vula i-Roku Store ku-TV yakho.
Ekhoneni elingezansi kwesokudla, uzobona inketho yokusesha; kulapho ongabheka khona Umamukeli Wasendaweni Yabalingisi.
Uma yonke into isifakiwe, buyela ekhasini eliyinhloko lemenyu yedivayisi yakho.
Faka okwakamuva cinema HD kuhlinzekwe kusixhumanisi esandulele bese uyiqala.
Manje kufanele ukhethe ifilimu noma uhlelo lwe-TV ozolubuka.
Uzonikezwa izixhumanisi ezihlukile zokufinyelela imuvi noma uhlelo olukhethile.
Kumelwe uqale uThephe futhi ubambe noma yiziphi izixhumanisi ezivelayo, bese ukhetha inketho ethi Vula ngakho Konke Ukusakaza.
Yilokho kuphela okukhona kukho! Manje uchungechunge lwakho lwefilimu/i-TV oluthandayo lungase lubukwe ku-Roku. Ngeke uvinjelwe ukuthatha izingcingo noma ukuthumela imilayezo ngenkathi usakaza ku-smartphone yakho ye-Android.
Kuya Faka Cinema HD I-APK ku-Roku, landela lezi zinyathelo ezinhlanu ezilula. Uma unemibuzo, sicela ungangabazi ukusithinta nge- ikhasi lokuxhumana.
Abalandeli be-Android bazojabula ukufunda ukuthi okusha I-Google TV 4K nge Chromecasts isekela izinhlelo zokusebenza ze-Android nemidlalo. Lokhu kusho ukuthi ungafaka ama-APK e-Android enkampani yangaphandle ku-Google TV 4K yakamuva nge-Chromecast futhi. Ake sibheke indlela yokufaka Cinema HD I-APK ku-Google TV 4K usebenzisa Chromecasts kulesi sihloko.
Ukufaka Cinema HD I-APK engenazikhangiso on I-Google TV 4K, kufanele uqedele uchungechunge lwezenzo. Nasi isifinyezo esifushane ukuze kube lula kuwe.
Nika amandla Izinketho Zonjiniyela (Ingxenye 1)
Landela lezi zinyathelo ezingezansi ukuze uxhume igajethi yakho ye-Google TV ne-smart TV yakho.
Thepha inkinobho Yemenyu Yephrofayela ekhoneni eliphezulu kwesokudla sesikrini se-Google TV.
Izilungiselelo, isithonjana segiya Thinta Khetha i-System Scroll phansi bese ukhetha Ku-Android TV OS Yakha izikhathi ezingu-7 usebenzisa inkinobho ephakathi nendawo yesilawuli-kude se-Google TV, sicela ukhethe Mayelana.
Sicela uchofoze I-Android TV OS Build 7 izikhathi usebenzisa inkinobho ephakathi nendawo yesilawuli kude se-Google TV ngaphansi kokuthi Mayelana.
Uzobona ukufundwa kwesaziso “Ungunjiniyela.” Uzokwazi ukulanda izinhlelo zokusebenza zezinkampani zangaphandle zivuliwe I-Google 4K.
Faka Cinema HD I-APK ye-Google TV 4K (Ingxenye 2)
Sicela uye kunketho yezinhlelo zokusebenza ukusuka kumenyu evundlile esikrinini sasekhaya se-Google TV.
Bese, ngaphansi kwezigaba zohlelo lokusebenza, khetha okuthi Sesha Izinhlelo zokusebenza.
ukufaka thwebula ku-Google TV yakho ngokufaka Isilandi kubha yosesho.
Vula the Uhlelo Lokulanda uma ukufakwa sekuqediwe.
Sicela uvule Inqubomgomo > Ukuphepha nemikhawulo e lakho Izilungiselelo Zephrofayili.
Ngicela uhlole Imithombo Engaziwa inikwe amandla ngaphansi kwenketho Yemithombo Engaziwa.
Ngemuva kwalokho, vula uhlelo lokusebenza Lokulanda kusuka esikrinini sasekhaya ngaphansi kwesigaba sezinhlelo zakho zokusebenza.
Vumela ukufinyelela ngokuthepha okuthi Vumela.
Sicela ufake i-URL elandelayo kunkambu ye-URL Yohlelo Lokulanda Uhlelo ukuze uyilande Cinema HD I-APK yakamuva ye-Google TV.
Uma usuqedile ukulanda i-APK, kuzovela imiyalelo elula yokufaka esikrinini. Kuya Faka Cinema HD ku-Google TV, landela izinyathelo ezifanayo.
Yilokho kuphela okukhona kukho! Ungafaka noma iluphi uhlelo lokusebenza lwe-Android lwenkampani yangaphandle I-Google TV 4K nge Chromecasts ngokulandela imiyalelo engenhla.
Ungalubuyekeza kanjani uhlelo lokusebenza lwe-Cinema ku-Google TV nge-Chromecast
Inqubo yokubuyekeza Cinema HD ku-Google TV kuya enguqulweni yakamuva iqondile. Sikuchazele yonke into ngezansi.
Iya ku Izinhlelo zakho zokusebenza > Cinema HD.
Khetha bese ubamba ukufakwa kuhlu kohlelo lokusebenza.
Isikrini sizovela sikucela ukuthi ukhethe Buka Yekuchumana.
Vuselela noma Khipha yizinqumo ezimbili.
Vula I-Google TV uhlelo lokusebenza olukude kusistimu yakho ye-Android bese uya ku Amasethingi, bese ukhetha Izinhlelo zokusebenza. Khetha Cinema HD MOD APK ukuyisusa kweyakho
Sicela ukhumbule ukuthi ngeke uthole izibuyekezo ezizenzakalelayo zohlelo lokusebenza ngoba aluveli ku-Google Play Isitolo. Ukuze uthole inguqulo yakamuva, vele ukhiphe futhi ufake kabusha uhlelo lokusebenza.
Ukuze sikulethele ulwazi lokubuka amafilimu, nezinhlelo ze-TV ngenani elingenamkhawulo, abathuthukisi bokuqukethwe Cinema HD I-AP izoqhubeka ibuyekeza futhi ikhulule izinguqulo ezintsha ezinezici ezengeziwe, izinguqulo ezilungisiwe zamaphutha nokunye okuningi.
Uma ufuna ukuthuthukela enguqulweni yakamuva yohlelo lokusebenza, ungalandela izinyathelo ezilula ngezansi:
Uma uthola umlayezo wokubuyekeza ngokuzenzakalela njalo uma inguqulo entsha itholakala, ungachofoza ukufaka efasiteleni lokuvuselela bese uqala ukufaka inguqulo entsha.
Ungaphinda uhlole izinguqulo ezintsha ezibuyekeziwe zohlelo lokusebenza kusuka Imenyu → Khulumisana → Isibuyekezo Esisha Siyatholakala bese uqala ukubuyekeza inguqulo entsha ukuze uyijabulele.
Ngemva kokuqeda ukufakwa kwe- Isinema apk, uzothola isicelo silula kakhulu ukusisebenzisa ngoba asidingi ulwazi lobuchwepheshe. Ungakwazi ukuvula ngokushesha lolu hlelo lokusebenza esikrinini esikhulu ukuze uqale ukujabulela ukusakaza-bukhoma okuqukethwe.
Lapho uvula ifayela le- I-Cinema Apk ngokokuqala ngqa, uzobona ulwazi oluyisisekelo lohlelo lokusebenza. Bese uzothi "Qhubeka” ukuze uqhubeke usebenzisa lolu hlelo lokusebenza, noma ungathepha okuthi “Close” uma ufuna ukuyeka.
Uma uqhubeka nokusebenzisa i-Cinema Apk, uzokwethulwa ngesixhumi esibonakalayo somsebenzisi, esizobonisa imibukiso ye-TV ngesidlali sevidiyo esizenzakalelayo. Ukuze ukhethe ukusakaza amamuvi wamahhala, yiya ku Imenyu Bese ukhetha Ama-movie kusuka kwimenyu yokudonsa.
Kukhathalogi yokuqukethwe yile Cinema Apk ekunikezayo, uzothola iqoqo lamamuvi e-Hollywood adumile nezinhlelo ze-TV, futhi ungakhetha noma yikuphi okuqukethwe okuyintandokazi ongakujabulela ngokukhetha ekhasini eliyisiqalo noma ngokukusesha usebenzisa ibhokisi lokusesha.
Ngemuva kokukhetha okuqukethwe okuthandayo, uzodinga ukuthinta “Buka” inkinobho bese uqala ukuzicwilisa ezinhlelweni ezikhangayo namamuvi. Ungaphinda ukhethe ezilimini ezihlukene ezingaphezu kwezingama-20 ezisekelwa i-Cinema APK. Ngenxa yalokho, ungakwazi ukubuka okuqukethwe okudumile ezindaweni lapho ungajwayele khona ulimi lwendawo.
Uma unganelisekile ngokusetha okuzenzakalelayo kwalokhu I-Cinema Apk, ungakwazi ukulikhipha futhi ufake kabusha uhlelo lokusebenza. Ungasebenzisa i- I-Debrid yangempela xhuma ijeneretha ukuvimbela ukugcinwa kwesikhashana. I-Debrid yangempela izokunikeza izixhumanisi eziningi zekhwalithi ephezulu ezivela kumaseva anciphisa ukugcinwa kwesikhashana futhi ungajabulela imuvi yekhwalithi ephezulu nezixhumanisi zokubonisa. Ngakho-ke ngena ngokushesha kumfucumfucu wangempela kuzilungiselelo ze-akhawunti yakho futhi uthole lezi zixhumanisi ngokushesha.
Imibuzo evame ukubuzwa mayelana Cinema HD V2
Ngingakwazi ukujabulela amamuvi nezinhlelo ze-TV uma ngingaxhunyiwe ku-inthanethi ku-apk yesinema?
Yebo. Le apk yesinema izokuvumela ukuthi ulande noma iyiphi imuvi, futhi uyibonise kudivayisi yakho, ukuze ujabulele kalula amamuvi alandiwe nezinhlelo ze-tv ngisho noma ungenalo uxhumano lwe-inthanethi noma idatha yeselula.
Ingabe ngidinga baqede ifoni yami Android ngaphambi ukulanda Cinema HD I-APK?
Cha, awudingi ukuqeda idivayisi yakho kuqala, futhi udinga ukunika amandla umthombo ongaziwa ukuze ulande i-apk yesinema.
Ngingakwazi ukwengeza imibhalo engezansi yamamuvi, imibukiso Cinema HD Apk mathupha?
Yebo. Cinema HD ikunikeza amamuvi amahhala nochungechunge lwe-TV enemibhalo engezansi etholakala kulabhulali yalolu hlelo lokusebenza lwamamuvi. Nokho, lolu hlelo lokusebenza lwe-apk ye-Cinema futhi likuvumela ukuthi ungeze imibhalo engezansi ngokwenza. Ukuze wenze lokhu, ungachofoza izilungiselelo kusidlali semidiya bese ukhetha ifayela lombhalo ongezansi (.srt) endaweni yokulondoloza yasendaweni futhi ujabulele okuqukethwe ngaso leso sikhathi.
Ingabe ngidinga ukubhalisa i-akhawunti futhi ngikhokhe imali yanyanga zonke ukuze ngibuke amamuvi nezinhlelo ku-Cinema Apk?
Cha. Ungakwazi ukufinyelela lolu hlelo lokusebenza ngokukhululekile ngaphandle kokuthi ubhalisele i-akhawunti. Futhi, le Cinema Apk esemthethweni kuwebhusayithi yethu cinemahdv2.net inikezwa mahhala, ukuze ukwazi ukucwiliswa kokuqukethwe okuyintandokazi lolu hlelo lokusebenza olungakunikeza ngaphandle kokukhathazeka nganoma yini.
Ingabe kuphephile ukufaka Cinema HD uhlelo lokusebenza kuwebhusayithi yakho?
Cinema HD Apk kuwebhusayithi yethu cinemahdv2.net ihloliwe futhi yahlolwa ngamathuluzi okulwa ne-malware. Siluhlolile uhlelo lokusebenza futhi asibonanga noma yiluphi unya, ngakho ungaqiniseka 100% ngokuphepha kwalolu hlelo lokusebenza futhi ujabulele okuqukethwe olukunikezayo.
Kufanele ngenzenjani uma yami Cinema HD uhlelo lokusebenza lunenkinga yesixhumanisi sokusakaza-bukhoma?
Uma uhlangabezana nenkinga ngenkathi uzama ukudlala isixhumanisi sokusakaza-bukhoma, kubonisa ukuthi uxhumano luphansi. Kufanele ulinde kuze kube yilapho isixhumanisi sesilungisiwe.
Ingabe kusemthethweni ukusebenzisa i- Cinema HD uhlelo lokusebenza?
Akukho emthethweni ukulanda nokufaka i Cinema HD uhlelo lokusebenza ocingweni lwakho, kodwa ukusakaza okuqukethwe okune-copyright kuwukwephula. Ngakho-ke ungasakazi lutho ngaphandle kokuqukethwe okugunyaziwe.
Is Cinema HD iyahambisana nedivayisi yami?
Ungakwazi ukufaka i-Cinema ku-Firestick/Fire TV, i-FireStick Lite, i-Android TV Boxes, amadivaysi eselula e-Android, nokuningi.
Is Cinema HD Uhlelo lokusebenza lwe-movie olungcono kakhulu olutholakalayo?
Yebo, Cinema HD Uhlelo lokusebenza manje seluyinketho engcono kakhulu yokubuka amamuvi nemidlalo yethelevishini mahhala.
Ngilusetha Kanjani Uhlelo Lokusebenza Lwe-TV Yami?
Lokhu akumele kube yinkinga eminyakeni ye-Google Chrome, i-Amazon Firestick, nobuchwepheshe obufanayo.
Ingabe i Cinema HD I-APK iyasebenzisana nama-Smart TV?
Ama-Samsung Smart TV, ama-LG Smart TV, ama-Panasonic smart TV, omabonakude be-Sony, omabonakude be-Sony Bravia, amasethi we-Mi TV, ama-cloudwalker smart TV, ama-TCL smart TV, amasethi e-Kodak Smart TV, neminye imikhiqizo eminingi iyatholakala.
Is Cinema HD iyahambisana nama-smart TV kanye neFirestick/Fire TV?
Yebo! Cinema HD I-APK ingase futhi ilandwe futhi ifakwe ku-Firestick noma i-Fire TV. Ungase futhi ufake Cinema HD ku-Android TV, i-Android Box, i-Nvidia Shield, i-PS 4, ne-Xbox One.
Ingabe kuyadingeka ukusebenzisa inethiwekhi yangasese ebonakalayo nge Cinema HD?
Kodwa-ke, sincoma ukusebenzisa isevisi ye-VPN enekhono uma ubuka Cinema HD.
Kungenzeka yini ukufaka Cinema Hd kwi-Windows PC?
Yebo! Ungasebenzisa izinqubo ezichazwe kulesi sihloko ukufaka Cinema HD ku-Windows PC/Laptop.
Ingabe kukhona ukwesekwa kwe-Chromecast nge Cinema HD?
Yebo! Cinema HD v2 isekela i-Chromecast.
Cinema HD I-AP ingenye yezinhlelo zokusebenza eziningi ze-Android ezikunikeza izinhlelo zakho ozithandayo namamuvi. Lolu hlelo lokusebenza lugqama kakhulu ngokuthi luhlinzeka abasebenzisi be-Android ngohlelo lokusebenza lwe-Cinema kanye nama-movie we-HD anezinkulungwane zamamuvi nochungechunge lwe-TV. Ungakwazi ukwanelisa ukuthanda kwakho kwemuvi ngalolu hlelo lokusebenza, ngakho landa ngokushesha inguqulo yakamuva ku-Android, Fire stick & PC kuwebhusayithi yethu ukuze uyijabulele njengamanje.
© 2022 CinemaHDv2.Net. Wonke Amalungelo Agodliwe.